Semalt Expert: Ity no fomba hiarovana ireo tranonkala avy amin'ny mainty hoditra SEO
Ny SEO ratsy dia manondro ny fampiharana ny tetika mainty SEO amin'ny tranonkala iray hafa. Matetika, ny fanafihan'ny SEO dia napetrak'ireo mpifaninana mpanakorontana tsy mitongilana miaraka amin'ny tanjona hampihenana ny fisian'ny tranonkala iray. Diso SEO mety hamotika tranonkala iray amin'ny alàlan'ny spamming mahery fihetsika sy ratsy. Herisetra ara-drariny izany, izay mety hitarika ny fatiantoka amin'ny fikarakarana fikarakarana fikarakarana fanao organika sy ny fahitana.
Amin'io lafiny io, ireo torohevitra fito nasongadina tao amin'ny lahatsoratr'i Alexander Peresunko, manam-pahaizana manokana avy amin'ny Semalt , dia mahasoa ho an'ireo niharan-doza SEO, ireo mety ho lasibatra ary ireo izay te hiaro azy toeram-piarovana amin'ny loza toy izany.
Ny laharam-pahamehana indrindra, ny fanamarinana tsy tapaka ny toerana tokony hatao. Ny fanamarinana tsy tapaka matetika dia tsy fomba fanao tsara ho an'ny orinasa, fa afaka manavotra ny voankazo ho an'ireo niharan'ny SEO ratsy ihany koa - how to make graphs online. Ankoatra izany, ny fanaraha-maso ny rohy momba ny rohy amin'ny tranonkala iray dia ny fomba tsara indrindra hanamarihana ireo asa ratsy, alohan'ny famelana ny fifehezana. Ny grafofa rohy ampiasaina amin'ity fanaraha-maso ity. Ny dingana goavana amin'ny fifamoivoizana araka izay aseho amin'ny rohy ifandalana dia tokony hampiakatra ny fanairana. Ankoatr'izany, ny fanaraha-maso an-tanana na ny fampiasana rindrambaiko fanaraha-maso ny rohy dia natao hanamarinana ny fahasalamana ho an'ny famerenana.
Ny fijerena ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala iray dia fomba faharoa amin'ny fiarovana ny tranokalana amin'ny SEO ratsy. Amin'ny maha-sehatra fototra azy, dia tokony hampiasa rindrambaiko mikararana ny tompona tranonkala mba hanaraha-maso ireo asa mampiahiahy na aiza na aiza dia mihelina ny haavon'ny tranonkala. Na izany aza, raha tsy misy na iza na iza hita, ary mbola misy ny olana dia mety ho tratran'ny fitifirana voatery.
Fahatelo, tadiavo ny votoaty nopotehina..Ny fanesoana dia manondro ny fampiakarana votoaty avy amin'ny vohikala hafa noho ny famoahana any amin'ny indostrian'ny varotra. Matetika, ny mpampihomehy dia mampifandray ny votoaty toy izany amin'ny rohy manafika amin'ny tranonkala spam. Ny fitaovana tahaka ny Copyscape dia azo ampiasaina mba hametrahana raha toa ka efa miparitaka ny votoatin'ilay tranokala.
Avy eo, Google My Business dia tsy maintsy asiana fanaraha-maso. Ny ankamaroan'ny orinasa tompon'andraikitra dia miasa mafy mba hamoronana ny lazan'ny marika sy hisarika ny mpanjifa. Na izany aza, ny tranonkalan'ny orinasam-pandraharahana sasany dia mahatsapa fanoheran'ny fanamarihana ratsy sy fanamarihana avy amin'ny mpanjifa. Amin'izao lafiny izao, ny mpangalatra amin'ny aterineto dia voatery hanara-maso ny lazan'ny orinasa hafa amin'ny fampiasana ny Google My Business mba hisorohana ny fialamboly SEO ratsy.
Ny fomba iray hafa hiarovana ny tranokalana amin'ny SEO ratsy dia ny mijery ny teny hoe 'CTR. Mety ho niaina toe-draharaha iray ny mpizarazara amin'ny aterineto sasany ka an-jatony ny fitsapana no mitsambikina avy hatrany rehefa avy eo amin'ny toerana iray. Ny botsim-panaovana programa dia mikendry manokana ireo teny fototra izay manatanteraka ity fihetsika ity. Mety ho sarotra ny fanafihana raha tsy voatsabo ny CTR ny teny fototra.
Ny fanamarinana ny laharana SERP dia teboka manan-danja iray hafa hisorohana ny SEO ratsy amin'ny tranokala iray. Ny filalaovana filaharana dia miantso ny fanaraha-maso ny SERP isaky ny fotoana. Ankoatra izany, ny tsy fahombiazan'ny fanamarinana karazana SERP dia mety hitarika ho amin'ny fanodinana fanindroany aorian'ilay hack. Rehefa manao fijery feno dia zava-dehibe ny fampiasana rindrambaiko fitazonana karazana amin'ny fanaraha-maso ny fahitana ny tranokala.
Farany, ny fanatsarana ny filaminan'ny tranonkala dia tena zava-dehibe. Ny tena manokana dia miaro vohikala manohitra ny fanafihana cyber. Ireo tompon-tranonkala dia tokony hiantoka ny fampiasana rindrambaiko vaovao sy fampiharana ny filaminana ilaina. Ny teknikam-pampitam-peo dia tsy SEO fa misy fiantraikany amin'ny SEO tranokala.
Ho famaranana, ireo niharam-boina amin'ny SEO dia tokony handray fepetra hitranga amin'ny fisorohana ny olana. Na izany aza, azo antoka kokoa ny manara-maso ny fahombiazan'ny tranonkala iray mba hisorohana ny SEO ratsy.